EMUI 10 bụ nke gọọmentị: Chọpụta akụkọ ya niile | Akụkọ akụrụngwa
EMUI 10 ka emeela n’ihu ọha: Ozi niile
Edere Esteban | | android, Mobiles
EMUI 10 bụ onye ọrụ ugbu a, mgbe ọnwa nke asịrị gasịrị. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke nhazi nkeonwe nke Huawei, nke dabere na gam akporo Q. Dị ka ọ dị na mbụ n'ụdị ikpe a, akara ndị China na-ahapụ anyị ọtụtụ usoro ọhụụ na ụdị ọhụrụ a nke mkpuchi onwe ya, iji nye ohere ka mma. nke ekwentị site na ndị ọrụ.
Ọ bụ na ya Mmepụta ogbako na China ebe Huawei egosiputa akwukwo ohuru nke EMUI 10. Offọdụ n'ime ha na-eri nri kemgbe ọnwa ole na ole, yabụ anyị nwere ike ịmata ihe ga-atụ anya oge a. Ihe ndị a bụ mgbanwe na-abịa na nke a.
1 Ihe ngosi ohuru na EMUI 10
2 Ọnọdụ gbara ọchịchịrị
3 Ọnọdụ ụgbọ ala
4 Njikọ ya na ngwaọrụ ndị ọzọ
5 Ihuchi mkpọchi
6 Na Ngosiputa mgbe niile
7 EMUI 10 at Kwekọrọ n'Ozizi ekwentị
Ihe ngosi ohuru na EMUI 10
EMUI 10 ga-ahapụ anyị na interface ọhụrụ. Companylọ ọrụ ahụ n'onwe ya ekwenyela ya, n'agbanyeghị na rue ugbu a, anyị enwebeghị ike ịhụ ihe ọ bụla gbasara ya. E kwuwo na na nke a ọ na-aga biputere site na interface na igodo na ala nke mpio ahụ. Na mgbakwunye, ha ji mkpụrụ akwụkwọ buru ibu, ahịrị dị mfe na animations ọhụụ na-echere anyị. O doro anya na ihe nkiri ndị a ga-adị ike ma dịkwa mma.
Ọzọ nke nnukwu akwụkwọ akụkọ ga-abata bụ mmeghe Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na EMUI 10. Akara ndị China na-ekwuwapụta na a webatara atụmatụ a site na mba, nke mere na usoro na ngwa ga-enweta ụda ọchịchịrị a. Ọzọkwa, ngwa ndị ọzọ na-enweta ọnọdụ ọchịchịrị a mgbe ejiri ya na ekwentị. Ọ ga-ekwe omume n'ihi na ha ga-eji ọchịchịrị gbaa ọchịchịrị.
Onye ederede niile gosiri na ihuenyo ogugu bụ otu n'ime nnukwu nsogbu Huawei na nke a. Yabụ, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na elebara anya n'akụkụ a. All iji nweta a ọchịchịrị mode ebe interface anọgide ogugu na mfe iji mgbe niile.
Gam akporo Auto now na-enweta ụdị nke ya na EMUI 10. N'okwu a, Huawei na-egosi HiCar, nke ga - enyere gị aka ijikọ ekwentị na ụgbọ ala mgbe niile. Mgbe anyị mere nke a, a ga-enye ndị ọrụ ohere ọtụtụ atụmatụ. N'ime ha anyị hụrụ onwe anyị ka anyị na-edozi egwu a na-ege, ịnyagharị ụgbọ ala n'oge ma ọ bụ nwee ike ịgbanye ntụ oyi tupu ịmalite, n'etiti ọrụ ndị ọzọ. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ nhọrọ na-adọrọ mmasị.
Njikọ ya na ngwaọrụ ndị ọzọ
Akụkụ ọzọ dị mkpa n'okwu a bụ Njikọ ma ọ bụ njikọta na ngwaọrụ ndị ọzọ. Emere EMUI 10 n'ụzọ dị ka ụzọ iji kwado usoro okike nke Huawei. Companylọ ọrụ ahụ ga-eme ka ọ dịkwuo mfe ijikọ ekwentị na ngwaọrụ dịka drones ma ọ bụ ọkà okwu a ma ama (nke na-enweghị ụbọchị mmalite na Spain). Ọzọkwa n'ihe banyere njikọta na kọmpụta enwere ndozi.
N'ezie ọ bụ ubi ebe ha hapụrụ anyị mgbanwe kachasị. Kemgbe ihe atụ ebuputala ihe ntughari ikuku na kọmputa. Ọ bụ ọrụ ị nwere ike ịdọrọ faịlụ na ihuenyo ekwentị mebere. Nke a bụ ihe ga - enyere anyị aka idetuo faịlụ n'etiti ngwaọrụ abụọ ahụ, n'akụkụ abụọ, oge niile.
Amamịghe echiche na-aga n'ihu na-enweta ọnụnọ EMUI 10. Ọ na-akụda mkpọchi mkpọchi n'oge a, na mgbanwe nke na-ada ụda na-atọ ụtọ. A ga-enyocha ọdịnaya nke foto dị na ekwentị mkpọchi ekwentị. Site n'ime nke a, a ga-etinye ederede na mpaghara ebe anaghị ekpuchi ọdịnaya n'ihi ya. A ga-eji ihuenyo dị mma n'ụzọ dị otú a. Ya mere, dabere na foto dị, a ga-agbanwe ọnọdụ nke ederede ahụ.
Na Ngosiputa mgbe niile
Huawei na-emelite mgbe niile na ọnọdụ Ngosipụta na EMUI 10. Ekwentị ndị China na-enwetazi onyonyo ọhụụ, nke kachasị agba, nke iji chọọ ekwentị mma mgbe anaghị eji ya. Emebatala usoro ọhụụ ọhụụ, yana ihe ịchọ mma ọhụụ na nke a. Nwere ike ịhọrọ oge ọ bụla ndị ịchọrọ iji na ngwaọrụ ahụ.
EMUI 10 at Kwekọrọ n'Ozizi ekwentị
Na mgbakwunye na ịkpọsa akụkọ ya, Huawei kwadoro ya aga ahapụ EMUI 10 beta na Septemba 8. Ekwentị mbụ ga-ekwekọ na ya ekpughekwala. Maka ugbu a ọ bụ ndepụta belatara, ọ bụ ezie na a na-atụ anya na ọ ga-agbasa karịa izu. Mana maka ugbu a anyị nwere ndepụta ekwentị ga-enwe ike ịnweta ya n'ọnwa Septemba nke afọ a.
Ekwentị ndị ga-abanye EMUI 10 beta Ha bụ: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 Porsche Design, Huawei Mate 20 X, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite, Honor V20 na Honor Magic 2. N'oge a ọ bụ naanị ha bụ ndị na-emepụta China egosipụtara, n'ezie anyị ga-enwe aha ọhụrụ n'oge na-adịghị anya, yabụ anyị chere maka akụkọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » EMUI 10 ka emeela n’ihu ọha: Ozi niile
Wiko Y80, nyocha na ọnụahịa na atụmatụ
SYMFONISK oriọna na ọkà okwu si IKEA na Sonos, obere bụ ihe [nyochaa]